February 3, 2020 – Warmae.com
, article, Article, Myanmar Traditional Foods, Shan, Warmae Review
ကလောရဲ့ နာမည်ကြီး စားသောက်ဆိုင်များ
ခရီးထွက်ကြမယ့်သူတွေအတွက်ဘယ်ဆိုင်မှာ ဘာစားရမလဲဆိုတာခေါင်းမစားတော့အောင်ဆိုင်လေးတွေလက်လှမ်းမီသလောက် စုစည်းထားပေးပါတယ်။ဒီဆောင်းပါးက အင်တာနက်ကအချက်အလက်တွေကို ကိုးကားပြီးရေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက် ရှမ်းပြည်ရဲ့ သိပ်လှပတဲ့နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့
ကလော ကစားသောက်ဆိုင်တွေအကြောင်းကို စရေးပါမယ်။
𝗠𝗮𝗹𝘂𝗰𝗮 𝘃𝗶𝗹𝗹𝗮 𝗥𝗲𝘀𝘁𝗮𝘂𝗿𝗮𝗻𝘁 & 𝗕𝗮𝗿
ဒီဆိုင်က ဓာတ်ပုံခရေဇီတွေအတွက် လုံးဝမိုက်မယ့် location အပြင်အဆင်လေးတွေနဲ့ဆိုင်ပါ။ ဆိုင်မှာ အစားအသောက်အစုံလင်ရှိပြီး Europe လိုင်းပါရလို့ နိုင်ငံခြားသားတွေအတွက်ပါ အဆင်ပြေတယ်။
ဒီဆိုင်ကလည်း ကလောရဲ့ နာမည်ကြီးစားသောက်ဆိုင်ထဲမှာ မဖြစ်မနေထည့်သွင်းရမယ့် ဆိုင်တစ်ဆိုင်ပါ။
No. 45(A) East Bo Gone 3rd Quarter Kalaw Southern Shan state,Kalaw.
09 519 9476
ရာသီဥတုအေးအေးလေးမှာ ကော်ဖီပူပူလေးသောက်မယ့်သူတွေအတွက် ဒီနေရာကအကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါ။ဆိုင်ပုံစံလေးက ချစ်စရာကောင်းပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရတာနဲ့တင် တော်တော်မိုက်နေပါပြီ။ တကယ်လို့သင်ကကော်ဖီနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုနှစ်သက်မယ်ဆိုရင် ဒီဆိုင်ကို အတော်လေးသဘောကျမှာပါ။
09 261 392 989
𝗞𝗮𝗹𝗮𝘄 𝗙𝗮𝗿𝗺 𝗛𝗼𝘂𝘀𝗲
ကလောတောင်ယာအိမ် ရိုးရာစားသောက်ဆိုင်လေးပါ။ ကလောမြို့နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အပြင်အဆင်နဲ့ဆိုင်ပုံစံလေးက ချစ်စရာကောင်းတယ်။ တကယ့်ကိုစိတ်ကူးကောင်းကောင်းနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဆိုင်လေးဖြစ်လို့
တောတောင်သဘာဝရဲ့ အရသာကို ခံစားနိုင်မယ့် နေရာလေးတစ်ခုပါပဲ။
Kalaw Farm House ကလောတောင်ယာအိမ်မြက်ရဲအင်းလမ်း၊ မြက်ရဲအင်ကျောင်းတိုက်အတွင်းစေတီဘယ်ဘက်လမ်းကြားတွင်း။
09 44757 5741
ကလောရောက်ရင် မနက်စာကို ဒီဆိုင်မှာ မဖြစ်မနေစားဖို့ တချို့ကညွှန်းကြတယ်။
ဆိုင်အရမ်းမကြီးတဲ့ အိမ်ဆိုင်လေးဖြစ်ပေမယ့် ရှမ်အစားအစာကောင်းလို့ ကလောမှာနာမည်ကြီးပြီးလူသိများတဲ့ ရှမ်းခေါက်ဆွဲဆိုင်လေးပါ။ ရှမ်းပြည်ရောက်ပြီး ရှမ်းခေါက်ဆွဲကောင်းကောင်းစားချင်ရင်တော့ပြည့်ပြည့် ဆိုတဲ့ ရှမ်းခေါက်ဆွဲဆိုင်လေးကို အရောက်သွားသင့်ပါတယ်နော်။
ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီး၊7sister စားသောက်ဆိုင်ဘေး
ကလောမြို့ရဲ့ မြန်မာအစားအသောက် ကောင်းကောင်းလေးတွေရတဲ့ဆိုင်ပါ။ကလောမှာတော့ ဒီထမင်းဆိုင်က လူသိများပြီး တော်တော်များများလည်း စားကြတယ်လို့သိရပါတယ်။
Pyi Taung Su Road ,Kalaw
081 50 207